Waziir Lagu Dhaawacay Magaalada Asmara. – Calamada.com
Waziir Lagu Dhaawacay Magaalada Asmara.
calamada December 25, 2018 1 min read
Wararka ka imaanaya Eriteria ayaa sheegaya in nin hubeysan uu toogtay Jeneraal Sibhat Efrem oo hadda ahaa wasiirka Tamarta iyo Macdanta horayna usoo noqday wasiirka difaaca, ilo wareedyo ayaa sheegaya in wasiirka rasaas lagala dhacay qeybaha sare ee jirka.
Warbaahinta afka dowladda ku hadasha ayaa xaqiijisay in wasiirka oo oo dhaawac ah loo qaaday dalka dibaddiisa balse waxay aad uga gaabsatay in ay faah faahiso qaabkii uu dilku u dhacay iyo cidda geysatay.
Safiirka dowladda Eriteria u fadhiya wadanka Japan ayaa bartiisa Twitterka ku qoray in Sibhat Efrem uu toogtay nin hubeysan oo meel luuq ah ugu gambaday xilli uu kasoo baxayay gurigiisa oo kuyaal maaalada Asmar.
Sibhat Efrem ayaa muddo 11 sanadood xiriira ahaa wasiirka gaashaandhigga wuxuuna ahaa mas’uulkii hoggaaminayay dagaalkii Itoobiya iyo Eriteria dhaxmaray 1998 illaa 2000 waana siyaasi ay isku dhowyihiin madaxweynaha xukuumadda Asmara Asias Afawarki.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo-18-04-1440 Hijri.
Next: Saraakiil Ka Tirsan Dowladda Mareykanka Oo Shil Diyaaradeed Ku Dhintay.